ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတိုင်းသိချင်နေတဲ့ ရည်းစားထားခြင်းနှင့် လက်ထပ်ခြင်းအပေါ် အမြင်ကို Park Hae Jin ပြောပြလာ | News Bar Myanmar
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတိုင်းသိချင်နေတဲ့ ရည်းစားထားခြင်းနှင့် လက်ထပ်ခြင်းအပေါ် အမြင်ကို Park Hae Jin ပြောပြလာ
လူပျိုကြီး Park Hae Jin ဟာ မကြာသေးမှီက အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ရည်းစားထားခြင်း နဲ့ လက်ထပ်ခြင်းအပေါ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့သဘောထားကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ လူပျိုကြီးကတော့ လတ်တလောမှာ ရည်းစားထားဖို့ကော လက်ထပ်ဖို့ကော အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးတဲ့နော်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။
Park Hae Jin ပြောသွားခဲ့တာကတော့ “ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တာ။ အဲ့တာကြောင့် တခြားလူတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်တော့အချိန်တွေကို ပေးရမှာနှမြောတယ်။ ကျွန်တော်အဲ့ဒီ့ ကိစ္စတွေအတွက်လည်း အချိန်မရှိသေးဘူး” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်းပြောသွားတာကတော့ “တကယ်လို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွဲဖြစ်ရင် သူ့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးပေးရမယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်အတွက်ကျွန်တော်တောင် အချိန်မလောက်ဘူး။ ကျွန်တော် အဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် အရာအားလုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ Relationship ဟာသာယာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လက်ထပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဒီလိုဆက်ပြောသွားပါတယ်။ “လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့လည်း အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် အသက် ၂၅ နှစ်တုန်းကတော့ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ကျရင် လက်ထပ်မယ်ပေါ့။ အသက် ၃၀ ရောက်တော့လည်း အသက် ၃၅ ကျရင် လက်ထပ်မယ်ပေါ့။
အဲ့လိုနဲ့ ရွှေ့လာလိုက်တာ ခု ၄၅ ကျရင် လက်ထပ်မယ်ဖြစ်နေပါပီ။ အဲ့အချိန်ကျရင်လည်း ထပ်ပြီးတော့ ရွှေ့ဖို့ စဉ်းစားအုံးမှာပါပဲ” ဆိုပြီး ဟာသနှောကာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ Park Hae Jin ကတော့ လူပျိုကြီးပဲ ဆက်လုပ်တော့မယ့်ပုံပါပဲနော်။ အားလုံးကော? ဝမ်းသာနေကြလား? လူပျိုကြီးကို လက်ထပ်စေချင်နေကြပြီလား?
Next My Unfamiliar Family ရိုက်ကွင်းကို Coffee Truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Lee Jong Suk »
Previous « BBC ရဲ့ Undercover ကိုရီးယား Version မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် YeonWoo Jin နဲ့ Han Sun Hwa